Vangaindrano : lehilahy telo nahatrarana rongony 40 gony | NewsMada
Vangaindrano : lehilahy telo nahatrarana rongony 40 gony
Saron’ny zandarimariam-pirenena ao Vangaindrano teo am-piomanomanana ny hanondrana rongony miisa 40 gony ny lehilahy telo, ny zoma 14 avrily 2017 lasa teo. Araka ny fanazavan’ny zandary, noho ny fikaroham-baovao nataon’izy ireo tsy ankiato, nahazo loharanom-baovao izy ireo momba ny fisian’ireo telo lahy manao trafikana rongony. Niroso tamin’ny fikarohana avy hatrany ny zandary ka noraisim-potsiny ny lehilahy iray niaraka tamin’ny rongony 40 gony milanja 360 kg. Nosamborin’ny zandary avy hatrany ilay lehilahy tompon-trano nahatrarana ireto rongony ireto ka nanoro ny namany hafa mpiray tsikombakomba aminy momba ity varo-maizina ity. Tratra avokoa izy telo lahy mpanao trafikana rongony ireto.
Fantatra nandritra ny famotorana fa teo am-pitadiavana fiara afaka hitondra ireto rongony ireto hihazo aty an-dRenivohitra ry zalahy no tratran’ny zandary. Nilaza izy ireo fa avy any Vohitromby, kaominina ambanivohitra Vohipano Vangaindrano ihany ny nividianan’izy ireo ireo zava-mahadomelina ireo.
Hatreto aloha tsy mbola voafehy mihitsy ny fiparitahan’itony zava-mahadomelina itony na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny famongorona ny mpanao trafika itony rongony mahery vaika itony.